Fall Guys သည်သူတို့၏စတူဒီယိုကို ၀ ယ်သောအခါ Epic Games တွင်ပါဝင်သည် Androidsis
Epic Games သည် Fall Guys ကိုဖန်တီးခဲ့သော Mediatonic စတူဒီယိုကိုဝယ်ယူခဲ့သည်
Manuel Ramirez | 03/03/2021 16:00 | NOTICIAS
Epic Games သည်လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Tonic Games Group ကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်Fall Guys ၏ Mediatonic စတူဒီယိုဖန်တီးသူ၏မိခင်ကုမ္ပဏီ၊ ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက YouTubers ဒါဇင်ပေါင်းများစွာနှင့်အတူကြောင်ကိုရေထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည့်အွန်လိုင်းဂိမ်း။
အဖြစ်ကောင်းစွာဆိုပါတယ် Epic Games ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tim Sweeny, သူတို့သည် metaverse ကိုဖန်တီးနေခြင်းမှာလျှို့ဝှက်ခြင်းမဟုတ်ပါ နှင့် Tonic Games သည်ဤပန်းတိုင်နှင့်စံနှုန်းတူတူပင်။ Fortnite ပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားဂိမ်းများပိုင်ရှင်များ၏လက်ထဲသို့ရောက်သွားပြီးမကြာမီမှာပင် Apple နှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့နေခြင်းဖြစ်သည်။
Sweeny ကြောင့်ကြောင့်ပြောဆိုထားသည် ဒီကို virtual အနာဂတ်၏ဖန်တီးမှုအစွမ်းထက်သောဂိမ်းများ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုသူတို့သိသောသူတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်လိုအပ်သည်။
ကြီးမားသတင်းများ@Mediatonic ငါတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးကြောင်းကြေငြာရန်နှစ်သက်ကြသည် @EpicGames မိသားစု
- ယောက်ျားများ 4041 Fall? မကြာမီ (@FallGuysGame) မတ်လ 2, 2021
Tonic Games Group ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dave Bailey ကကြေငြာချက်တစ်ခုအရလူတိုင်းကပြောသကဲ့သို့ပြောကြသည် သူတို့အတွက်ပြုလုပ်ထားသည့်ဂိမ်းတစ်ခုလိုသည်။ Epic မှာ Bailey ၏စကားများအရသူတို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးထားသည့်အိမ်ရှိပုံရသည်။
သောစကားအချို့ Tonic Games Group ၏ Epic Games မှဝယ်ယူခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်များတွင်အရေးကြီးသည်, ငါတို့နှင့်အတူကျန်ကြွင်း Guys ၏အနာဂတ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ကြားဖြတ်မည်မဟုတ်ပါကြောင်းနှင့်အတူကျန်ကြွင်း။ ၎င်းသည် PC နှင့် Playstation နှစ်ခုစလုံး၌ Nintendo Switch နှင့် Xbox တို့တွင်အစောဆုံးကစားနိုင်သည်။
တကယ်တော့ ဒီသီချင်းဟာ Fall Guys အတွက်အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘလော့ဂ်တခုမှာ Mediatonic ကမှတ်ချက်ချသည်; ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထိမိစေတဲ့အပိုင်းအတွက် Android version အတွက်သိပ်ကြာမှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကစတူဒီယိုက developer ၃၅ ယောက်ကနေ ၁၅၀ ကျော်အထိကြီးထွားလာတယ်။ ဒါတောင်မှ Fall Guys မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ကျွန်တော်အချို့အခြားအလားတူဂိမ်းကစားပါလိမ့်မယ်နေစဉ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » Epic Games သည် Fall Guys ကိုဖန်တီးခဲ့သော Mediatonic စတူဒီယိုကိုဝယ်ယူခဲ့သည်
Meizu 18 နှင့် Meizu 18 Pro တို့သည် Snapdragon 888 နှင့် Android 11 တွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်